Iingcebiso eziluncedo zokuBhala iNgxelo yoBuqu ka-2022
Oktobha 26, 2021 U-Okpara Francis
Ungasibhala njani isincoko esikhulu sokwamkelwa kwesidanga
Isiteyitimenti esilungileyo sobuqu sinokunceda ukonyusa amathuba omntu ophumelele isikolo ngoko ke kubalulekile ukujolisa ingqalelo kumacandelo amaninzi abalulekileyo okomeleza ukubhala komntu.
Ingxelo yobuqu ikwabizwa ngokuba yinkcazo yenjongo, licandelo lesicelo sesikolo esiphumelele isidanga apho abafaki-zicelo bavunyelwe ukuba baqaqambise amandla kwindawo yabo yomdla.
Kubalulekile ukubandakanya amava athile obugcisa kunye namava obuqu aphembelele isigqibo sokufaka isicelo kwisikolo esiphumelele isidanga kwaye uqaqambise indlela oku kuya kunceda ngayo abafaki-zicelo ukuba baphumelele kwinkqubo abafaka isicelo kuyo.
Entle umbhali wencoko kufuneka igqame ngenxa yokuba ibonakalisa ngokufanelekileyo amava awodwa, abalulekileyo, kunye namava athile anxulumene nendawo yomdla womfaki-sicelo kwaye ibonisa ulwazi namava kummandla wobuchule obunxulumeneyo.
Ukuqala kunye nokuphelisa iNgxelo yoBuqu
Njengaso nasiphi na isincoko, ukuvulwa okunomtsalane kufanele kutsalele umfundi ngaphakathi kwaye isiphelo kufuneka siphinde sichaze ingcamango ephambili yesincoko kwaye sigqibezele isincoko ngenqaku elakhayo.
Ukuvula kakuhle kunokuba yinyani enomdla enxulumene namava obuqu kunye namava omsebenzi, ingxelo etsala ingqalelo okanye inyani enxulumene nendawo yomdla, okanye isivakalisi esilula esixela inkqubo umntu ayenza kuyo kwaye ngoba. Ukuvula nokuvala kufanele kumisele ithoni elungeleleneyo, kodwa eyakhayo kwingxelo yobuqu.
Yintoni emayiBandakanywe kwisincoko sesiKolo sabathweswe isidanga
Ingxelo yobuqu yinxalenye ebalulekileyo ye isicelo sesidanga sesikolo kuba isoloko ikuphela kwecandelo lesicelo apho umenzi-sicelo evumelekileyo ukuba abhekisele kwikomiti yolwamkelo.
Abafundi bafuna isincoko somenzi-sicelo ukuze bafumane ulwazi oluthile malunga nenjongo yophando ekujoliswe kuyo ngumfaki-sicelo kunye nobungqina bamalungu asele ekhona kunye/okanye uphando lwangoku eyunivesithi oluhambelana nemidla yophando echaziweyo.
Bakwajonge ukubona ukuba iinjongo zobungcali zomenzi-sicelo ziyahambelana neenjongo zenkqubo kunye neendlela apho iinjongo zomsebenzi zasemva kwesidanga ziya kuba negalelo kwinkqubo, icandelo lokufunda, okanye kwihlabathi liphela.
Ukuphendula le mibuzo kuya kunika isiseko apho ikomiti yezicelo zabaphumeleleyo inokulinganisa iinjongo zomenzi-sicelo ize igqibe enoba uya kulufanelekela na ucwangciso.
Ukuhlola iNgxelo yoBuqu
Kubalulekile ukuba ukuphonononga ukujonga ngocoselelo upelo, igrama, iziphumlisi, uchongo lwamagama, ubude, kunye nokufundeka ngokubanzi. Ingxelo yobuqu idla ngokuba phakathi kwamagama angama-500-1000 ngokuchwetheziweyo, ifonti yamanqaku ali-12. Iingcamango eziphambili kufuneka zahlulwe zibe yimihlathi.
Ababhali kufuneka basebenzise amagama acacileyo nachazayo bangabi namagama kakhulu. Ithoni yengxelo yobuqu ifanele ibe yeyakhayo kwaye iqiniseke. Ubuncinci abanye abantu ababini kufuneka bafunde ingxelo yobuqu bomxholo kunye nezilungiso phambi kokuba ingeniswe.
Ingxelo yoBuqu kokwenziwa nokungamele ukwenze
Ababhali kufuneka balumke baphephe ukuzigwagwisa, iinkcazo ezinde, ukusebenzisa ngokugqithisileyo “Mna”, ukubhekisa kwizinto ezingahambelaniyo nezinto ezifunwa ngabafundi abaphumelele kwisikolo samabanga aphakamileyo, izivakalisi ezibalekayo, ulwimi olungenamsebenzi okanye ulwimi olungenamsebenzi, iimpazamo zopelo okanye zegrama, okanye ukuphinda kuchazwe ulwazi kulwimi. phinda Uqalele.
Endaweni yoko, sebenzisa amagama enguqu kunye namabinzana (afana nangaphezulu, ke ngoko, njl.njl.), imidla yophando-ngqangi karhulumente, kunye namalungu e-faculty amagama njengoko ehambelana nale midla, phendula yonke imibuzo kwi-prompt, yahluka isivakalisi. ubude, nyaniseka kodwa uthobekile, kwaye ucele abahlobo abambalwa abathembekileyo okanye oogxa ukuba bafunde isincoko kwaye banike impendulo.
Ingxelo yenjongo yinxalenye ebalulekileyo yesicelo sesikolo sabaphumeleleyo. Kubalulekile ukuba abafaki-zicelo bachaze ngokucacileyo iinjongo zabo zesikolo esiphumelele isidanga, bagcine ithoni eyakhayo kunye neyobuchule kwaye basifunde isincoko ngocoselelo ukwenzela iimpazamo. Ezi ngcebiso ziya kunceda ekuqinisekiseni ukuba ingxelo yobuqu iyicandelo elipheleleyo nelinyanzelekileyo lesicelo sesikolo esiphumelele isidanga.
Ibhalwa njani i-Autobiography yeNkqubo yokuTshintshela uMfundi
Ungayibhala njani ileta yokwamkelwa kwabafundi
Ungayibhala njani iNgxelo yeLebhu kumanyathelo ama-5 alula
Ukukhawuleza njani ukufunda ukubhala ngaphandle kweempazamo
Post Previous:Ibhalwa njani i-Autobiography yeNkqubo yokuTshintshela uMfundi
Okulandelayo Post:UBhalo olucengayo lwaBafundi beKholeji